धोबीघाटमा अगेनो- जीवनशैली - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौं — ‘नेपालमा केही गर्न सकिँदैन’ भन्ने मानसिकता बनाउँदै आउनुभएको छ भने एकपटक धोबीघाटस्थित अगेनो – द हेस्टियामा जानुहोस् । यो रेस्टुरेन्टले आममानिसका यस्तै धारणालाई ब्रेक गर्न मद्दत गर्नेछ ।
साझेदारीमा उद्यम गर्न नसक्नेहरूले ‘आँ...ऽऽ पार्टनरसिपमा काम गर्नु हुँदैन । दु:ख खाइन्छ १’ भनेको पनि प्राय: सुनिन्छ । यस्तो मानसिकतालाई पनि अगेनोले गलत नै तुल्याइदिनेछ । २ करोड २५ लाख हाराहारी लगानीमा स्थापना गरिएको यो आउटलेटमा १८ जना लगानीकर्ता छन् । सायदै काठमाडौंमा यति धेरै साझेदारहरूले स्थापना गरेका थोरै उद्यम/व्यवसाय होलान् ।
धेरै लामो समयदेखि विकासे एजेन्डालाई करियर बनाउँदै आएका दीपक सापकोटा १८ लगानीकर्तामध्येका एक हुन् । ‘पार्टनरसिप बिजनेस नेपालमा चल्दैन र नेपालमा केही गर्न सकिँदैन भन्नेहरूलाई यो हाम्रो प्रोजेक्टले च्यालेन्ज गर्नेछ,’ सापकोटाले भने । खासमा आफूलाई बेकरीप्रेमी भन्ने सापकोटा धेरै लामो समययता एउटा इटिङ हब स्थापना गर्ने चाहना राख्दै आइरहेका थिए ।
‘हामी आफैं पनि धेरै होटल/रेस्टुरेन्टमा कार्यक्रम गरिरहने, तर सन्तुष्ट हुने सर्भिस, खाना भने प्राय: कहिल्यै नमिल्ने,’ हालैको एक अन्तर्वार्तामा सापकोटाले भने, ‘अन्तिममा बिल तिर्ने बेला जहिल्यै असन्तुष्ट भएर निस्किनुपर्ने अनि यस्तै पिरलोले अगेनाको आकार लिएको हो,’ उनले भने ।
यसमा लगानी गर्नेहरूले कम्तीमा ५ लाखदेखि बढीमा २० लाखसम्म रकम जुटाएका छन् । यो लगानी, टुगेदर होल्डिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिमा जम्मा हुन्छ । यसैको यो पहिलो परियोजना हो । यसले नेपालमा युरोपमा जस्तै कफी पिउने कल्चरलाई हाइप गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, बिन भने नेपाली नै । लगानीकर्ताहरूले नेपाली बिन, नेपाली उत्पादन, नेपाली रैथाने परिकारलाई जोड दिने भनेका छन् । त्यसैले पनि होला यहाँ पस्नेहरूले नेपालीपनको आभास पाउँछन् । सय जना अकुपेन्सी भएको अगेनाभित्र पस्नुभयो भने बुइगल, बारदली, रमझम, जम्काभेट, विश्राम कक्ष, बैठक कक्ष नाम दिइएका कोठा/लबी छन् ।
सञ्चालकहरूले यहाँ मौलिक नेपाली झल्किने दालभातलाई विशेष परिकारमा राखेका छन् । नेपाली खानाको पारखीका लागि यो अर्को सुखद समाचार हो । यसबाहेक कन्टिनेन्टल र इन्डियन रेसिपी पनि चलाइएको छ । सापकोटा अहिले सबैभन्दा बेकरी आइटमको डिमान्डबाट चकित छन् । ‘द्वारिका होटलमा लामो समय बिताएका बेकर हाम्रो बेकरीमा छन्,’ सापकोटाले भने, ‘हामी चाँडै काठमाडौंका ७/८ वटा स्थानमा बेकरीको फ्रेन्चाइज गर्ने तयारीमा छौं ।’
अपांग र बालमैत्री अवधारणामा डिजाइन गरिएको अगेनामा पुगिहाल्नुभयो भने यहाँको एम्बिएन्सले आकर्षित गर्छ । साढे ५ रोपनी क्षेत्रफलमा काफी हरियाली छ ।
बालबालिकाका लागि करिब डेढ रोपनी खेल्ने गार्डेन छ । मध्यम वर्गीय परिवारलाई टार्गेट गरिएको यहाँको मेनु पनि महँगो छैन ।
साढे ५ सय रुपैयाँ एक्लो ज्यानका लागि काफी हुनेछ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७४ १९:१६
जेष्ठ २६, २०७४ सुशील पौडेल
नायक प्रदीप खड्कालाई एउटै फिल्म ‘प्रेमगीत’ ले ह्वात्तै चर्चामा ल्याइदियो । जबकि त्यसअघि पनि उनले ‘स्केप’ भन्ने फिल्म खेलिसकेका थिए । तर त्यो फिल्मकै त चर्चा हुन पाएन, प्रदीपको के होस् ।यतिबेला फेरि उनी अभिनीत तेस्रो फिल्म ‘प्रेमगीत २’ रिलिज हुँदै छ ।
प्रदीप बन्लान् त राजा ?
नायक प्रदीप खड्कालाई एउटै फिल्म ‘प्रेमगीत’ ले ह्वात्तै चर्चामा ल्याइदियो । जबकि त्यसअघि पनि उनले ‘स्केप’ भन्ने फिल्म खेलिसकेका थिए । तर त्यो फिल्मकै त चर्चा हुन पाएन, प्रदीपको के होस् ।
यतिबेला फेरि उनी अभिनीत तेस्रो फिल्म ‘प्रेमगीत २’ रिलिज हुँदै छ । तर यो साता ‘प्रेमगीत’ का प्रेम ‘राजा’ को ठाँटमा देखापरे, दरबारमार्गकै एकतारे होटलमा । कार्यक्रम थियो, नेपाली इतिहासमा १३ औं शाह वंशीय राजाका रूपमा घोषणा भएका दीपेन्द्र शाहको प्रेमकथामा आधारित रही बनाउने भनिएको ‘दीपेन्द्र सरकार’ फिल्म घोषणा । राजा दीपेन्द्रकै झल्को दिने गरी भरमग्दुर प्रयाससहित प्रदीप कार्यक्रममा त देखिए तर उनीबाहेक फिल्मका कास्ट एन्ड क्रु कुनै निश्चित थिएन । ‘प्रेमगीत’ कै निर्माता सन्तोष सेनले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट लाग्ने बताइरहँदा न फिल्मको निर्देशक को हुने भन्ने पत्तो थियो, न त दीपेन्द्रकी प्रेमिका देवयानी बन्ने नायिका नै खुलाइयो । दरबार हत्याकाण्ड भएकै मिति जेठ १९ को पूर्वसन्ध्यामा हतारहतारमा गरिएको ‘दीपेन्द्र सरकार’ घोषणा कार्यक्रममा प्रदीपले त राम्रै चर्चा पाए पनि, तर फिल्म बन्नेमा भने अझै केही आशंका राखिएको छ । चलचित्र विकास बोर्डमा फिल्मको नाम दर्तादेखि निर्माण इजाजत नै नलिई अनावश्यक पब्लिसिटी स्टन्टमा उत्रिइएको छ । बोर्ड अध्यक्ष राजकुमार राई भने त्यो नामको फिल्मबारे कुनै जानकारी नआएको प्रतिक्रिया दिँदै त्यस्तो विषयमा फिल्म बन्न गाह्रो हुने प्रतिक्रिया दिनुले कतै प्रदीपको दीपेन्द्र बन्ने चाहना फोटोमा मात्रै त सीमित हुने हैन ?
आर्यन काखा सुदर्शन पाखा
फिल्म क्षेत्रमा काखी च्याप्ने वा लात्ती हानेर पाखा पुर्‍याउने प्रचलन नौलो हैन । यतिबेला यस्तै गरेकी छन्, नायिका रेखा थापाले ।
लामो समय राजनीतिक वृत्तमा हराएर फेरि फिल्म निर्माण र अभिनयमा लागेकी रेखाले होम प्रोडक्सन ‘रुद्रप्रिया’ का लागि आफ्नो अपोजिटमा निर्देशक समेत रहेका सुदर्शन थापालाई लिने घोषणा नै गरिन् । सुदर्शन निर्देशनमा चम्के पनि अध्ययन भने उनको अभिनयमा हो । तर त्यही अभिनय क्षेत्रमा भने सुदर्शन जम्न त परैको कुरा चान्स पनि पाइरहेका छैनन् । केही अघि नै निर्देशक गोपालचन्द्र लामिछानेले ‘लम्फु’ को लिडमा खेलाउने भने । केही भाग छायाकनसमेत भएपछि अचानक सुदर्शन ‘लम्फु’ टिमबाट आउट भए । यतिबेला नयाँलाई लिएर उक्त टिमले छायाकनसमेत सकाएको छ । पछि सुदर्शनलाई आलोक नेम्वाङले ‘अझै पनि’ बाट डेब्यु गराए । फिल्म हेर्नै दर्शक हलमा नआएपछि सुदर्शनको कामको मूल्यांकन हुने कुरै भएन । बल्लबल्ल रेखाको अपोजिटमा खेल्ने कुराले राहत महसुस गरेका सुदर्शनलाई फेरि रेखाले पनि पाखा पारेकी छन् । फिल्ममा ‘प्रिया’ को भूमिकामा देखिने रेखाले आफ्नो ‘रुद्र’ आर्यन सिग्देललाई छानेकी छन् ।
पछिल्लो फिल्म ‘कसले चोर्‍यो मेरो मन’ मा सँगै देखिएका आर्यन र रेखाबीच त्यसपछि बोलचाल नै टुटेको थियो । अहिले अचानक दुईबीच मिल्ती हुनुको घाटा सुदर्शनलाई भयो । रेखाले आर्यनलाई काखा च्यापिदिएपछि उनी पाखा परे । हुन त सुदर्शन पनि यतिबेला आफ्नै निर्माण, निर्देशन रहेको फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ को पोस्ट प्रोडक्सनदेखि प्रचारप्रसारको चटारोमा व्यस्त पनि छन् । यस्तो अवस्था छोडेर ‘रुद्रप्रिया’ को छायाकनमा जानु सहज पनि थिएन । तर रेखासँग अपोजिटमा देखिने चाहना त सुदर्शनले सायदै छोड्थे होलान् ?
‘आधा लभ’ जोडी
जोडी बन्नु र भत्किनु ग्ल्यामर फिल्डमा सामान्य भइसक्यो । हामीकहाँ पनि एक्टर, मोडलबीच त्यस्तो प्राक्टिस चल्न थालेको छ ।
नजिकबाट चिन्नेहरू नायिका ऋचा शर्मालाई पनि प्रेमचरी ठान्छन् । ऋचामा अथाह प्रेमभाव भएकै कारण रिलेसनसिपमा रहन रुचाउँछिन् भन्छन् । अभिनयमा आफूलाई अब्बल सावित गरिसकेकी ऋचाले प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरी मायामा आफूलाई कहिले सावित गर्ने हुन् त्यो त समयले नै बताउला । तर यतिबेला भने उनी ‘आधा लभ’ का कारण चर्चामा छिन् । बलिउडमा भर्खरै ‘हाफ गर्लफ्रेन्ड’ ले दर्शक रिझाइरहेका बेला ऋचा ‘आधा लभ’ फिल्मबाट यसै शुक्रबारदेखि हलमा आएकी छन् ।
अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूको कथा मात्रै भनिएकाले फिल्मबारे खासै खुलस्त त पारिएको छैन, तर ऋचाका जीवनका आधा लभ भने खुलस्त छन् । कुनै बेला नायक विनय श्रेष्ठसँगको प्रेममा खुलेकी ऋचाको पछि निर्देशक निश्चल बस्नेतसँग पनि नाम जोडिन पुग्यो । तर त्यसबारे दुवैले कहिल्यै हो भनेनन् । निश्चलको बिहेमा ऋचा स्वयं सरिक थिइन् । राष्ट्रिय पुरस्कार विजयी ऋचाको नाम मिडियाले यदाकदा नायक गौरव पहारीसँग पनि जोडे । हुन त दुई असल साथी पनि हुन् । अब यतिबेला शंकाको खेती ‘आधा लभ’ कै निर्देशक अर्पण थापासँग गर्न पनि थालिएको छ । अर्पणसँगको लभ फिल्मकै जस्तो आधाआधीमै मात्र सीमित हो वा पूरै चुर्लुम्म डुबेकी हुन्, त्यो त स्वयं ऋचाले नै भनुन् । नत्र हल्ला शंका गर्नेलाई कतिसम्म सोच्ने भन्नेमा कुनै छेकबार हुँदैन है ।